दिल्लीका यी ३ खेलाडी : जो योपालि पूरा आईपीएल खेल्न सक्छन्
१. श्रेयस अय्यर : सूचीको शीर्ष स्थानमा दिल्ली क्यापिटल्सका कप्तान श्रेयस अय्यरको नाम आउँछ । दिल्लीका लागि उनी कप्तानीका साथ-साथै ब्याटिङबाट पनि अहम भूमिका निभाइरहेका छन् । पछिल्लो सिजनको आईपीएलमा दिल्ली फाइनलसम्म पुग्नुमा अय्यरको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेका थियो ।
अय्यरले पछिल्लो सिजनमा दिल्ली क्यापिटल्सका लागि सबैभन्दा बढी १७ म्याच खेल्दै ५ सय १९ रन बनाएका थिए । उनी यो सिजनको आईपीएलमा पनि दिल्लीको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् । अय्यर यो सिजनमा दिल्लीका लगि पूरै सिजन भरि मैदानमा म्याच खेल्दै देखिन सक्छन् ।
२. ऋषभ पन्त : सूचीको दोस्रो स्थानमा युवा विकेटकीपर-ब्याट्सम्यान ऋषभ पन्तको नाम आउँछ । उनी टी-२० क्रिकेटका विस्फोटक ब्याट्सम्यान मध्येका एक हुन् । पन्त पछिल्लो केहि समयदेखि आफ्नो लयमा देखिएका छन् । उनी केहि समयदेखि भारतको लागि लगातार रन बनाइ रहेका छन् ।
पन्तले पछिल्लो आईपीएल सिजनमा दिल्लीका लागि १४ म्याचमा कूल ३ सय ४३ रन बनाएका थिए । उनी चोटका कारण केहि म्याचमा उपलब्ध हुन सकेनन् । तर, यो आईपीएल सिजनमा पन्त दिल्लीका लागि सिजनका पूरै म्याच खेल्न सक्छन् । उनी दिल्लीका एक महत्वपूर्ण खेलाडी हुन् ।
३. रविचन्द्रन आश्विन : सूचीको तेस्रो स्थानमा भारतीय स्पिनर रविचन्द्रन आश्विनको नाम आउँछ । उनी दिल्ली क्यापिटल्सका लागि आईपीएल खेल्ने गर्दछन् । आश्विन टेष्ट क्रिकेटमा मात्र हैनन् टी-२० क्रिकेटमा पनि बलिङ गर्नमा माहिर रहेका छन् ।
प्छिल्लो आईपीएल सिजनमा आश्विनले दिल्लीका लागि १५ म्याचमा १३ विकेट आफ्नो नाममा गरेका थिए । उनी बलिङमा मात्र हैनन् आवश्यक परेमा आफ्नो टिमको लागि ब्याटिङ पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले, आश्विन यो आईपीएल सिजनमा दिल्लीका लागि सिजनमा सबै म्याच खेल्दै मैदानमा देखिन सक्छन ।